Sida Loogu guuleysto deeqaha waxbarasho ee PhD ee Kanada 2022
Sida Loogu guuleysto Deeqaha PhD ee Kanada
Raadinta Ph.D. deeq waxbarasho ee Kanada? Maqaalkani wuxuu bixinayaa hagitaan lagama maarmaan u ah sida loogu guuleysto deeqaha waxbarasho ee PhD ee Kanada iyo dhammaanba hadda Ph.D. fursadaha deeqaha waxbarasho ee dalka.
Kumanaan arday ah ayaa u qulqulaya Kanada ujeedooyin waxbarasho, oo ay ku jiraan ardayda doonaya inay sii wataan waxbarashadooda iyagoo raadinaya shahaadada PhD, maaddaama hay'adaha Canadian-ka laga aqoonsan yahay adduunka oo dhan inay bixiyaan waxbarasho heer sare ah iyo dhammaan shahaadooyinka shahaadada, oo ay ku jiraan Ph.D. shahaadooyinka, oo laga helo hay'ado caan ah oo Canadian ah ayaa si isku mid ah looga aqoonsan yahay meel kasta oo adduunka ah.
Marka laga reebo bixinta waxbarashada heer caalami ah, Kanada sidoo kale waxaa loo yaqaanaa fursadaha deeqaha waxbarasho ee cajiibka ah ee ay siiso ardayda dhammaan heerarka waxbarasho, taas oo ah, waxaa jira deeqo waxbarasho oo loogu talagalay shahaadada jaamacadeed iyo ardayda qalin jabisa.
Iyada oo loo marayo qodobadeeda deeqda waxbarasho, arday badan oo suurtagal ah ayaa loo soo jiitay inay wax ku bartaan Kanada oo ay ka qayb qaataan waxbarashada ugu fiican ee ay bixiso hay'addeeda. Sidoo kale, iyada oo loo marayo deeqaha waxbarasho ee la bixiyay, oo laga diyaariyey dhammaan heerarka waxbarasho, ardaydu waxay awood u yeesheen inay soo bandhigaan awooddooda oo buuxda, ku guuleystaan ​​riyadooda oo ay ku guuleystaan ​​shaqooyin guul leh.
1 Maxay ardaydu u sii wataan shahaadada PhD?
2 Sidee Canadian Ph.D. deeqaha waxbarasho ayaa la maalgeliyaa?
3 Maxay ardayda PhD ugu baahan yihiin deeq waxbarasho?
4 Shahaadada PhD-da ee Kanada miyaa bilaash ah?
5 Sideen ugu heli karaa deeq waxbarasho oo Kanada ah?
6 Ardayda PhD ma helaan mushaar Kanada?
7 Mudo intee leeg ayey PhD ku joogtaa Kanada?
8 PhD-da ma ku qalantaa Kanada?
9 Ma jiraa PhD gudaha Kanada oo leh gunno?
10 Miyaan Ka Heli Karaa PhD gudaha Kanada deeq waxbarasho?
11 Deeqaha ugu wanaagsan ee PhD ee Kanada
11.1 1. Vanier Canada Deeq waxbarasho (Vanier CGS)
11.2 2. Jaamacadda Waterloo International Masters Award of Excellence (IMAE)
11.3 3. Deeqda waxbarasho ee Ontario Graduate (OGS)
11.4 4. Ontario Trillium Deeqaha (OTS)
11.5 5. Jaamacadda Manitoba Shahaadooyinka Jaamacadeed (UMGF)
11.6 6. Pierre Elliot Trudeau Foundation Deeqaha Deeqaha
11.7 7. Deeqaha Qalinjabinta Kanada (CGS)
11.8 8. Jaamacadda Calgary Graduate Scholarships
11.9 9. Alberta Waxay Abuurtay Deeqo Waxbarasho Ardayda Qalinjabisay
11.10 10. Banting Shahaadada Dhakhtarka Kadib
Maxay ardaydu u sii wataan shahaadada PhD?
Waxaa jira tirooyin aan dhammaad lahayn oo sababa in ardaygu go'aansado inuu qaato shahaadada PhD laakiin sababaha ugu waaweyn ayaa ah;
In aad si togan uga qayb qaadatid goobtaada waxbarasho ee aad dooratay
Si loo hormariyo loona xoojiyo xirfadaada iyo aqoontaada meel gaar ah
Si aad sare ugu qaadatid jaranjarada tacliinta oo aad u noqotid mid xirfad leh
Sababo shaqsiyadeed awgood
Ujeeddooyinka mustaqbalka fog
Inaad u furnaato xitaa fursado waaweyn, fursado fiican.
Si aad u horumariso naftaada iyo noloshaada
Jacaylka waxbarashada iyo sii wadida waxbarashada
Inaad noqotid deeq bixiye wax ku biirin kara awood iyo waxqabad cadeynaya
Adduunyada had iyo jeer isbedeleysa, helitaanka aqoon dheeri ah, xirfado iyo kor u qaadistooda waa lama huraan maadaama aadan garanaynin saamaynta ay isbadalku ku yeelan doono iyo kor u qaadida jaranjarada waxbarasho waa mid ka mid ah siyaabaha muhiimka ah ee aad naftaada ugu diyaarin karto una qalabayn karto isbedel kasta.
Helitaanka deeq waxbarasho si aad u sii wadato shahaadadaada PhD waxay kaa caawin doontaa si weyn inaad diirada u saarto waxbarashadaada adigoon ka walwalin maalgelinta.
Deeqdani waxay kaa caawin kartaa inaad bixiso khidmadaha waxbarashadaada PhD ama kharashyada nolosha iyo mararka qaarkood, waxaad heli kartaa deeqo waxbarasho oo daboolaya labada khidmad iyo kharashyada guud sida kuwa Ms / PhD of Arts iyo Sayniska deeqda waxbarasho ee MIT (In kastoo midkani khadka tooska ah ku jiro).
Sidee Canadian Ph.D. deeqaha waxbarasho ayaa la maalgeliyaa?
Deeqaha PhD ee Canadian Canadian waxaa lagu maalgeliyaa kuwa soo socda;
Hay'adaha gaarka loo leeyahay / kuwa dawliga ah, shirkadaha iyo shirkadaha
Shakhsiyaad deeqsi ah oo laga yaabo, xaaladaha badankood inay noqdaan ardaydii dugsiga ee bixiya deeqda waxbarasho.
Thanks to dadka kor ku xusan, arday badan, oo ay ku jiraan ardayda PhD, ayaa awood u yeeshay inay helaan waxbarasho heer caalami ah oo Kanada ah iyada oo loo marayo qayb ahaan maalgelin ama si buuxda loo maalgeliyo deeqaha waxbarasho.
Kuwa deeqaha waxbarasho ee ay bixiso dowladda, halkan waxaa ku yaal liis buuxa oo ah deeq waxbarasho oo buuxda oo laga helo dawlada Kanada in arday kasta oo caalami ahi dalban karaan.
Maxay ardayda PhD ugu baahan yihiin deeq waxbarasho?
Mid ka mid ah sababaha wanaagsan ayaa ah in ardayda badan ee PhD ay leeyihiin waxqabad iskuul oo xad dhaaf ah oo ka bilaabma jadwal shaqo oo buuxa ilaa tababarka qalinjabinta sidaa darteed waxay haystaan ​​waqti aad u yar ama aan lahayn si ay shaqo u helaan taas oo ka caawin karta iyaga inay lacag helaan si ay u bixiyaan khidmadaha waxbarashadooda shahaadada PhD iyo kharashyada kale.
Ardayda PhD-da waxay u qalmaan deeqo waxbarasho sida ugu badan ee arday kasta oo kale oo ujeedkiisu yahay inuu raadsado jaamacad ama shahaado jaamacadeed.
Sidoo kale, ardayda qaarkood ma lahan awood dhaqaale oo ay ku maareeyaan waxbarashada PhD laakiin wali waxay rabaan inay helaan shahaadada. Sababahan iyo kuwa kale oo badan ayaa ardayda uga tagaya fursad kale oo aan ahayn inay raadsadaan deeqo waxbarasho oo gacan ka geysan doonta daboolida kharashaadka lagama maarmaanka ah.
Shahaadada PhD-da ee Kanada miyaa bilaash ah?
Maya, Shahaadada PhD-du maaha bilaash Kanada. Ardaydu waa inay lacag ku bixiyaan inay waxbartaan oo ay helaan shahaadada marka laga reebo deeqaha waxbarasho ee qodobkani ku siinayo hagitaan.
Kharashka maaliyadeed ee lagu helayo shahaadada shahaadada PhD ee Kanada way ku kala duwan yihiin jaamacadaha. Muwaadiniinta reer Kanada iyo deganayaasha joogtada ah, waa ku dhowaad $ 5,000 sanadkii halka ardayda caalamiga ah ay u dhowdahay $ 9,000 sanadkii oo ay ku jiraan kharashka nolosha.
Ardayda caalamiga ah waxay sidoo kale ka heli karaan kaalmo dhaqaale jaamacadaha Kanada, fiiri liistada Jaamacadaha Kanada ee bixiya gargaarka dhaqaalaha ardayda caalamiga ah.
Sideen ugu heli karaa deeq waxbarasho oo Kanada ah?
Waxaa jira dhowr deeqo waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyey oo Kanada ah oo ardaydu codsan karaan waana la heli karaa ardayda gudaha iyo kuwa ajaanibta ahba waana tan sida aad ku heli karto deeqaha waxbarasho;
Xulo kulliyad ama jaamacad Kanadiyaan ah, barnaamij shahaado ah (shahaadada koowaad, shahaadada koowaad ama qalin-jabinta) iyo goob waxbarasho, oo lagu dhigo
Sii wad inaad la xiriirto sarkaalkaaga aqbalaadda dugsiga martigelinta ee ku saabsan deeqda waxbarasho ee ay bixiso iskuulku.
Waxaa jira ilo waxbarasho oo kale oo la heli karo oo aad codsan karto, bilow inaad raadiso iyaga adoo samaynaya cilmi-baarista lagama maarmaanka ah
La socodsii qof kasta oo hareerahaaga ah oo ku saabsan arrinta deeqda waxbarasho haddii ay dhacdo in qof kastaa soo baxo ama ay hayaan macluumaad ku saabsan barnaamij kasta oo deeq-waxbarasho ah oo ay kugula soo socodsiin karaan.
Codso deeqaha waxbarasho ee ugu badan ee aad awooddo, waxay kordhineysaa fursadahaaga helitaanka deeq waxbarasho oo had iyo jeer la kulan mid kasta oo ka mid ah waqtiyada kama dambaysta ah.
Waxaa jira fursado dhowr ah oo deeq waxbarasho ah oo laga heli karo Kanada tiro ka mid ahna si buuxda ayaa loo maalgeliyaa. Waxaad ka eegi kartaa liiska ah deeqaha waxbarasho ee dibloomada ee laga heli karo Kanada inaad codsan karto.
Waxaad sidoo kale iska hubin kartaa qaar ka mid ah fursadaha deeqaha waxbarasho ee Kanada oo si buuxda loo maalgeliyo, oo ay siisay dowladda Canada iyo xulafadooda. Ku Venier Canada deeq waxbarasho qiimihiisu yahay $ 50,000 waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee loogu jecel yahay Kanada, in kasta oo ay asal ahaan u tahay muwaadiniinta Kanada.
Jaamacadaha ugu sareeya Kanada waxay bixiyaan deeq waxbarasho sanadle ah, waa wax fiican inaan haysano maqaal dib ugu soo celinaya dhammaan macluumaadka kaa caawin doona cilmi baaristaada deeqaha waxbarasho ee hay'adaha ugu sareeya Kanada, waxaad ka heli kartaa isku duba ridka maqaalka dusha sare Jaamacadaha Kanada ee bixiya deeqda waxbarasho sanadkiiba for free.
Ardayda PhD ma helaan mushaar Kanada?
Xaaladdan oo kale, waxay kuxirantahay ardayga, jawaabtu waa haa iyo waliba maya; Waan kuu sheegi doonaa sababta.
Ardayda PhD-da ah ayaa ka shaqeyn kara isla iskuulka ay ku raad joogaan shahaadada PhD laakiin ardayga ayaa loo daayay inuu go'aansado inuu shaqo dalbanayo iyo in kale. Ardayda PhD sidoo kale waxaa loo soo bandhigi karaa shaqo machadkiisa iyadoo lagu saleynayo khibrad iyo waxqabad laakiin ardaygu wuxuu kaloo go aansan karaa inuu aqbalo iyo in kale Shaqada.
Ardayda PhD waxay la shaqeyn karaan kooxda cilmi-baarista ee iskuulka, waxay bari karaan ardayda dhigata shahaadada koowaad ama shaqo kale oo loo qoondeeyo oo ku habboon iyaga inay qabtaan oo ay ku helaan mushahar. Xaqiiqdii, celceliska mushaharka ardayga PhD ee Kanada waa CA $ 24,000 sanadkiiba waana lacag aad u badan.
Mudo intee leeg ayey PhD ku joogtaa Kanada?
Guud ahaan, PhD-da Kanada waxay qaadataa 4 ilaa 6 sano. Waxay kuxirantahay barta waxbarashada iyo machadka, waxay qaadataa ilaa afar ilaa lix sano in lagu dhammeeyo shahaadada PhD ee Kanada.
PhD-da ma ku qalantaa Kanada?
Helitaanka PhD ee hay'ad la aqoonsan yahay oo ku taal Kanada waxay u qalantaa dinaar kasta iyo ilaha kale ee lagu bixiyo helitaankeeda. Waxaad tahay arday heer sare ah oo waxbarasho ah, baranaya waxyaabo sare iyo sameynta cilmi baaris aad adigu sameyso si aad u hesho jawaabo ama xalal wax ku soo kordhin kara adduunka oo yaa garanaya, waxaa laga yaabaa inay isu bedesho waxtar weyn oo gacan ka geysan doona in wax badan laga beddelo nool.
Sidoo kale haddii aad rabto inaad gasho cilmi-baaris waqti-buuxa ah ama aad ka mid noqoto koox cilmi-baaris oo gaar loo leeyahay ama dowladdu maalgeliso, waxaad u baahan tahay PhD si aad uga hesho boos xarun cilmi baaris ama urur oo aad ku hesho shahaadada Kanada waa u qalantaa.
Ma jiraa PhD gudaha Kanada oo leh gunno?
Haa, badankood deeqaha waxbarasho ee ugu sareysa ee PhD-da Kanada waxay la yimaadaan gunooyin bille ah ka-faa'iideystayaasha. Gunooyinkaan waxaa badanaa loo diyaariyaa ardayda si ay u daryeelaan kharashyadooda shaqsiyadeed.
Miyaan Ka Heli Karaa PhD gudaha Kanada deeq waxbarasho?
Kuwa jooga halkaas ee raadinaya sida loo helo PhD gudaha Kanada oo leh deeq waxbarasho, waxaan ku taxay tiro ka mid ah deeqaha waxbarasho ee laga heli karo Kanada oo aad ka dalban karto xiriirkooda dalabkooda.
Deeqaha ugu wanaagsan ee PhD ee Kanada
Deeqda Waxbarashada ee Vanier Canada (Vanier CGS)
Jaamacadda Waterloo International Masters Award Excellence (IMAE)
Deeqda waxbarasho ee Ontario (OGS)
Kaalinta Trillium Ontario (OTS)
Jaamacadda Manitoba Fududeeyayaasha Xirfadaha (UMGF)
Pierre Elliot Trudeau Foundation Deeqda Waxbarashada
Deeqda Qalinjabinta Kanada (CGS)
Jaamacadda Calgary Deeqaha Deeqaha ee Xafiiska
Alberta Innovates Ardayda Deeqda Waxbarashada
Iskuduwaha Wada-shaqeynta Dhakhtarka Kadib
1. Deeqda Waxbarashada ee Vanier Canada (Vanier CGS)
The Vanier Canada Graduate Scholarships (Vanier CGS) waxaa bilaabay dowladda Kanada sanadkii 2008 waxayna tan iyo markii ay siineysay aqoonyahanada PhD deeqda waxbarasho ee sanadlaha ah $ 50,000 sanadkiiba muddo seddex sano ah oo ah daraasad dhaqtarnimo oo laga helo hay'ad Canadian ah oo la aqoonsan yahay.
Vanier CGS wuxuu u furan yahay codsi muwaadiniinta Kanadiyaanka ah, deganayaasha joogtada ah iyo ajaanibta, iyo 166 arday ayaa ugu dambeyn loo xushay abaalmarinta deeqda waxbarasho. Deeqdan ayaa la siiyaa ardayda ka qalin jabisa oo leh rikoodh tacliimeed iyo cilmi baaris heer sare ah, xirfadaha hogaaminta iyo ka qeyb qaadashada weyn ee howlaha ka baxsan manhajka.
Nasiib wanaagse, waxaan haynaa maqaal faahfaahsan oo bixinaya dhammaan macluumaadka, oo ay ku jiraan shuruudaha u-qalmitaanka iyo tilmaamaha lagama maarmaanka u ah aqoonyahan PhD u baahan doono ku guuleysto deeqda waxbarasho ee Vanier Canada.
2. Jaamacadda Waterloo International Masters Award of Excellence (IMAE)
Abaalmarintan waxaa loogu talagalay oo keliya ardayda caalamiga ah ee galaya barnaamijka dhakhaatiirta cilmi-baarista ku saleysan ee Jaamacadda Waterloo, Kanada. Deeqda waxbarasho ee IMAE waxaa la siiyaa ardayda ka qalin jabisa iyadoo lagu saleynayo waxqabadka tacliimeed waxaana lagu qiimeeyaa $ 2,500 xillikiiba wadar ahaan shan xilli.
Deeqdani uma baahna nidaam codsi gaar ah, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad noqotaa arday caalami ah oo leh ogolaansho waxbarasho oo Canadian ah (fiisada ardayga) ee galaya barnaamijka qalinjabinta Jaamacadda Waterloo markii ugu horeysay oo aad leedahay waxqabad heer sare ah oo ah waxa Kulliyadda ayaa kuu adeegsan doonta inay kugu xusho abaalmarinta.
Waxaan diyaarinay hage ku saabsan sida aad ku heli karto Fiisada ardayga Kanada, Tilmaamuhu wuxuu kakoobanyahay sharciyo iyo shuruudo kaa caawin doona inaad hesho ruqsad waxbarasho oo sax ah Kanada.
3. The Deeqaha Shahaadada Ontario (OGS)
The Ontario Graduate Scholarship waxaa sanad kasta la siiyaa ardayda caalamiga ah iyo kuwa ka qalin jabiya gudaha Kanada ee doonaya inay ku sii wataan barnaamijka shahaadada jaamacadeed ee jaamacad la aqoonsan yahay ama kuleejka Ontario kuwa guuleystaana waxaa lagu xushaa waxqabadka tacliimeed ee aadka u wanaagsan.
Deeqda waxbarasho waxaa lagu qiimeeyaa $ 5,000 kalfadhi lix sano ah ama ilaa dhamaadka barnaamijka qalinjabinta iyo abaalmarinta waa inay la socotaa waxqabadkooda tacliimeed sidoo kale dhammaan jinsiyadaha waxaa lagu farayaa inay codsadaan barnaamijka deeqda waxbarasho illaa intaad haysato ogolaansho arday oo ansax ah iyo rabto inaad ku sii wadato barnaamijka qalin-jabinta jaamacadda Ontaariyo.
4. Deeqda waxbarasho ee Ontario Trillium (OTS)
Tani waa $ 40,000 qiimo waxbarasho oo sanadle ah oo la siiyo arday cusub oo caalami ah oo imanaya, oo leh oggolaansho waxbarasho oo ansax ah oo Kanadiyaan ah, oo ka diiwaangashan barnaamijka shahaadada qalin-jabinta ee waqtiga buuxa ee jaamacad la aqoonsan yahay ama kulliyad ku taal aagga Ontario.
Si aad ugu guuleysato OTS, qofka qaataha ah waa inuu ku guuleystay celcelis heerka koowaad ah (A- / 80% Ontario u dhigma) mid kasta oo ka mid ah labadii sano ee ugu dambeysay ee daraasad waqti-buuxa ah iyo guuleystayaasha waxaa si otomaatig ah loogu xushay iyadoo lagu saleynayo codsigooda barnaamijka qalin-jabinta.
Deeqdani waxay u dhigantaa $ 40,000 ardaykiiba waxayna sii socon doontaa seddex sano oo dheeri ah (wadar ahaan waa afar sano) illaa iyo inta ardaydu ay ku sii fiicnaanayaan tacliintooda.
5. Jaamacadda Manitoba Fududeeyayaasha Xirfadaha (UMGF)
UMGF waa abaalmarin sanadle ah oo deeq waxbarasho ah oo la siiyo ardayda qalin jabisa (kuwa caalamiga ah iyo kuwa gudaha ah) ee loo ogolaaday barnaamijka shahaadada jaamacadeed ee waqtiga buuxa ee Jaamacadda Manitoba.
Si aad ugu qalanto abaalmarintan ardaydu waa inay haystaan ​​ugu yaraan gelitaanka GPA ee 3.0 iyo wixii ka sarreeya, oo ay muujiyeen karti aqooneed oo sare iyo hanashada tacliimeed, sidoo kale, deeqdani waxay u dhigantaa $ 18,000 sanadkiiba illaa 4 sano oo ah daraasadaha takhasuska.
6. Pierre Elliot Trudeau Foundation Deeqda Waxbarashada
Ujeeddada laga leeyahay in la abuuro aqoonyahanno hoggaamineed, deeqdan waxbarasho waa barnaamij saddex sano soconaya oo loogu talagalay in lagu tababaro hoggaamiyeyaasha ku hawlan, iyadoo qalabaynaysa musharrixiinta takhasuska sare leh aaladaha ay kula wadaagi karaan kuna dabaqi karaan cilmi-baaristooda kuna noqon karaan hoggaamiyeyaal hal abuur leh hay'addooda iyo bulshadooda.
Si aad ugu qalanto deeqda waxbarasho, codsadayaashu waa inay horeyba looga aqbalay barnaamijka shahaadada jaamacadeed ee waqtiga buuxa ee cilmiga aadanaha ama cilmiga bulshada oo loo geeyay hay'ad Canadian ah oo la aqoonsan yahay.
Ardaydu way dalban karaan deeqda waxbarasho sanad kasta oo daraasad ah shaqadaada dhakhaatiirtuna waa inay la xiriirtaa Xuquuqda Aadanaha iyo Sharafta, Muwaadinnimada Mas'uuliyadda ah, Kanada iyo adduunka, iyo Dadka iyo Deegaankooda Dabiiciga ah si laguugu tixgeliyo deeqda waxbarasho.
Deeqdani waxay u dhigantaa $ 40,000 sanadkiiba muddo seddex sano ah, oo ka kooban kharashka waxbarashada iyo nolosha, iyo $ 20,000 oo kale sanadkiiba muddo saddex sano ah, oo daboolaya gunnada cilmi-baarista iyo safarka, oo la siiyo codsadayaasha leh waxqabadka akadeemiyadda, xirfadaha hoggaaminta, xirfadaha isgaarsiinta iyo ka-qaybgalka bulshada. .
7. Imtixaanka deeqda waxbarasho ee Canada (CGS)
Tani waa deeq waxbarasho oo 12-bilood ah $ 17,500 oo aan la cusbooneysiin karin oo la siiyay si loogu taageero ardayda leh heer sare oo ah guusha ee shahaadada koowaad iyo hore ee qalin-jabinta. Si loo tixgeliyo deeqda waxbarasho, codsadayaasha waa in horeyba loogu aqbalaa barnaamijka shahaadada jaamacadeed ee buuxa, qayb kasta oo daraasad ah, hay'ad Canadian ah oo la aqoonsan yahay.
Shuruudaha kale ee u-qalmitaanka ee CGS ayaa ah in codsadayaashu ay tahay inay gaaraan celcelis heerka koowaad ah mid kasta oo ka mid ah labadii sano ee la soo dhaafay ee dhammaystirka ahaa ee daraasadda waqtiga-buuxa ah oo aanu hore u qabanin deeqda waxbarasho ee qalin-jabinta Kanada
Deeqda ayaa la siiyaa sannad kasta ardayda 3,000 ee caalamiga ah iyo kuwa gudaha ah.
8. Jaamacadda Calgary Graduate Scholarships
Jaamacadda Calgary waxay leedahay abaalmarino kala duwan oo deeqo waxbarasho ah oo ay ardayda caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahi codsan karaan, liiska deeqaha waxbarasho waa kuwo dhaadheer oo aan dhammaad lahayn oo leh shuruudaha u-qalmitaanka ee kala duwan laakiin dhammaantood waxay wadaagaan hal shay oo ay ka mid yihiin;
Codsadeyaashu waa inay mar hore codsadeen ama ay rabaan inay codsadaan barnaamij shahaadada dhakhtarnimo ah oo ka socda hay'ad Canadian ah, ardayda caalamiga ahi waa inay haystaan ​​ogolaansho waxbarasho oo sax ah oo Kanadiyaan ah codsadayaashuna waa inay dhammaantood la kulmaan shuruudaha barnaamij kasta oo deeq waxbarasho ah oo ay codsadaan.
Sidoo kale, codsadayaasha waxaa lagu aqbalaa iyadoo lagu saleynayo waxqabadkooda tacliimeed ee wanaagsan iyo awoodaha hoggaamineed.
9. Alberta Innovates Ardayda Deeqda Waxbarashada
Alberta Innovates waxay siisaa deeq waxbarasho sanadle ah ardayda caalamiga ah, muwaadiniinta Kanadiyaanka ah iyo deganayaasha joogtada ah ee raadinaya barnaamijka shahaadada dhakhaatiirta mid ka mid ah saddexda cilmi-baaris ee u-qalma; ICT, Nanotechnology ama Omics jaamacad ku taal Alberta, Canada.
Alberta waxaa ku yaal saddex jaamacadood oo kala ah;
Saddexdaan jaamacadood waxay bixiyaan deeqda waxbarasho ee qalin-jabinta ee Alberta Innovates ee ardayda heerarka dhakhaatiirta daraasadda ku sameysa cilmi-baaris waqti-buuxa ah mid ka mid ah jaamacadaha kor ku xusan, ardayda leh waxqabadka tacliinta heer sare waxaa badanaa loo tixgeliyaa deeqda waxbarasho.
10. Iskuduwaha Wada-shaqeynta Dhakhtarka Kadib
Isku-dubbaridka takhasuska ka dambeeya ee takhasuska waa abaalmarin deeq waxbarasho oo sanadle ah oo u furan codsi muwaadiniinta iyo deganayaasha joogtada ah ee Kanada iyo ardayda caalamiga ah ee ku habboon aagagga cilmi-baarista, Cilmi-baarista caafimaadka, sayniska dabiiciga ah iyo / ama injineernimada, sayniska bulshada iyo / ama aadanaha si loo aqoonsado Hay'ad Canadian ah.
Is weheshiku wuxuu u dhigmaa $ 70,000 sanadkii sanadkiiba muddo labo sano ah, oo la siiyo kuwa ugu fiican ee codsada dhakhtarka kadib, gudaha iyo dibaddaba, kuwaas oo si togan uga qayb qaadan doona kobaca dhaqaalaha, bulshada iyo cilmi baarista ku saleysan dalka.
Kuwani waa kuwa ugu wanaagsan 10 deeqda waxbarasho ee Kanada ee ardayda qalin-jabisa way dalban karaan. Waxaad wax badan ka baran kartaa mid kasta oo ka mid ah fursadaha la taxay adoo adeegsanaya xiriiriyeyaasha la bixiyay si aad wax badan uga ogaato waqtiga kama dambaysta ah iyo shuruudaha kale ee lagama maarmaanka ah.
Deeqaha Canadianka Deeqaha PhD Barashada Hagaha Dibadda
deeqaha ugu wanaagsan ee phd canadwaxbarasho buuxda oo ah deeqda waxbarasho ee PhD ee canadaphd ee canada oo leh deeq waxbarashobarnaamijyada phd ee canada oo leh deeq waxbarashodeeqaha waxbarasho ee phd ee Kanada
Previous Post:Shuruudaha Jaamacadda Victoria | Khidmadaha, Deeqaha waxbarasho, Barnaamijyada, Darajooyinka
Post Next:Shuruudaha Universitè de Sherbrooke | Khidmadaha, Barnaamijyada, Kulliyadaha, Darajooyinka